Yuusuf iyo Geedi ma Dumiyayaalbaa mise waa Dabranayaal???
By:Abdirahman Mohamed Garjeex (Caano-geel)
Daadaheeyayaashii dawladaan ku meel gaar,dadku waxay ka sugayeen dulqaad iyo walaalnimo.
Dabka oo la dhiga’iyo deyn la isku guda iyo daka-daha oo la furabaa Dadweynuhu sugayeen.
Dabadeed maxaa dhacay?
Duqu wuxuu na leeyahay degmadaas ma tagi karo,Muqdishana dableey Dooxataa jira.
Dadka oo heshiis iyo walaaltinimo uu ka doonaa,Duqa loo cimaamaday,ee nin maradiisa duugaa ma qaawanaanbuu ka doorbiday?
Dulucdiyo iyo ujeedada Yuusuf iyo Geediba doorbinbaa la saaroo,dabarbaa ku xiranoo Meles-baana daadihin.
Dugsi ma leh Amxaaradu dabka ooy ku siisiyo dadkagoo isdila-beey u dabaaldageysaa.
Dabadeedna baaqiga iyo Badaa-dooy daldalataa damaceedu yahayee.
Dadweynoow inta aad dengiigtaan doqonimo la jiiftaan dulmi ugu gargaataan dagaal-oogayaashiin.
Dawlad aad heshaan iyo duliga ood iska qaadaan waa habeenkii xalay tagay.
Daa’imoow Allahayoow na Daryeel Duloownaye.
Akhristoow waxaan shaki laheyn in shirkii dibu heshiinta ee labada sanno iyo ka badan loo fadhiyey Kenya ay dawladii ka soo baxday in ay burburto qarka u saaran tahay amase, alaha naga badbaadiyee ay keeni karto dagaal sokooye.
Hadaba su’aasha is weydiinta leh waxaa weeye xagee ayey sarta ka qurantay?
Si aan Jawaabtaas u helno waxaa mudan in aan is la fahamno arimaha ay isku khilaafsan yihiin madaxda sare ee DFKM. Arimaha la isku hayo waa labo:
(A) In si ku meel gaar ah ay dawladu u dagto meel aan muqdisho ahayn
(B) Iyo in ciidamada safka hore (Ethiopia,Kenya& Djibouti) aysan ka mid noqon ciidamada dalka la keenayo.
Labadaan arimood oo labaduba ay xasaasi yihiin, aan ku hor maro qodobka hore oo ah in dawladu si ku meel gaar ah ay u degto meel aan Muqdisho aheyn.Akhristoow waxaan wada ogsoonahay:
(1) in badan oo shacbiga ka mid ah ama in badan oo golaha Baarlamaanka ka mid ah ay ka soo horjeedaan in dawladu degto meel aan Muqdisho ahayn. Sidoo kale” (2) Qeyb ka mid ah Baarlamaanka iyo shacbigaba waxay rabtaa in dawladu ku sii hakato meel aan Muqdisho aheyn iyagoo ku doodaya in aysan dawladu ku howl gali Karin Muqdisho amaan daro ka jirta aawgeed.
Hadaba aanu u kala garqaadno labadaan kooxood anagoo akhristoow aniga iyo adiguba iska dhigeyna hogaanka sare ee DFKM oo ah kan laga rabo in uu si xigmadu ku jirto u kala saaro labadaan qeybood dawladiina ay u hirgaliso barnaamijkeeda si aan dhibaato ama kala jab ku yimaada garabyada dawlada uusan u dhicin.
Aan ku bilownee Shacbigii rabay in ay dawladu ay Muqdisho timaado waxay ku muujiyeen banaanbaxyo aan kala joogsi laheyn iyagoo leh waa rabnaa dawlada waa rabnaa dawlada caleemo qoyan ayaanan ku soo dhaweyneynaa.hadaba maxay ka yeeleen Madaxweynaha,Ra’iisul wasaaraha iyo kooxdii la fikirka ahaa ee ka tirsanaa Baarlamaanka?
Dhagaha ayey ka fureysteen codsigii dadweynihii reer Muqdisho u fidiyeen Dawlada, Waliba waxaa khaladkii ugu weynaa dhacay markii ay Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaruhu ay safarka ku tageen gobolo ka mid ah Soomaaliya oo ay ka baaqsadeen dadkii reer Muqdisho oo caleemo qoyan u diyaarsaday soo dhoweynta Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaraha. Hadaba reer muqdisho iyo Goboladii kale ee aan Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaruhu booqan in saas loo galo ma Khaladbaa mise waa sax?
Akhristoow waxaa ka muuqda khaladaad in shacbiga reer Muqdisho aaney qadarin Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaruhu.Waxaana ka mid ah khaladaadkaan in aad si cad u weel duwdo shacbigaagii oo ku raba ama si kale haddii aan u dhigo anoo tusaale ka dhiganaya Aabe laba wiil dhalay oo midna oontiisa xalaal ka dhiganaya , kan kalana iska xaaraantimeynaya. Hadaba aabahaasu soo noqon maayo mid aan si cadaalad ah ula kala dhaqmin labadiisa wiil.
Indira Gandhi oo mar ka aheyd Ra’iisul wasaare dalka India ayaa waxay tiri:
Once the leadership was to rule by power,but today the leadership is to bring the people together.
Ana waxaan tixdeydii ku iri:Dadka oo heshiis iyo walaaltinimo uu ka doonaa Duqa loo Cimaamaday,ee nin maradiisa duugaa ma qaawanaanbuu ka doorbiday?
Waxaa maanta ragga hogaanka Soomaaliyeed haya looga baahan yahay dulqaad,samir,dad isku wadid iyo in ay qodaxdii kasta oo cagta dawladda muddaba ay si taxadar leh u soo bixiyaan.
Dhinaca kale Madaxweynaha,Ra’iisul wasaaraha iyo ragga ku fikirka ahba oo soo jeediyey in aan hadda dawladdu ku howlgali Karin Muqdisho,amaan daro aawgeed.
Hadaan arintaas miisaan saarno waa run in Muqdisho amaankeedu uusan wanaagsaneyn amaba uusan ka jirin maamul xasiliya amaan darada ka jirta,ayna u baahan tahay in si aad u dadaal badan loogu howlgalo xukuumad iyo shacbiba in Muqdisho lagu soo celiyo ahaan shihii ay ahaan jirtay hooyadii dalka Soomaaliyeed.
Hase ahaatee waxaa arintu adkaaneysaa haddii Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaruhu ku adkeystaan Muqdisho tagi meyno ilaa la xasiliyo Amaankeeda,
Hadaba Akhristoow soo markaas Madaxweynuha iyo Ra’iisal wasaaruhu uma aysan furin in badan oo ka mid ah 275 Xildhibaan DFKM in ay yiraahdaan Magaalo haddii ay nin u roon tahay nin kale ayey u daran tahay,tanoo macnaheedu yahay haddii Muqdisho nin u daran tahay,Jowhar iyo Beydhabana nin kale ayey u daran tahay.
Arintaanuna waa tan keentay in xukuumadii iyo Baarlamaankii laba dhinac u kala jabaan. Waxayna arintaanu qaracan u tahay shacbigii u oomanaa dawladnimda mudada dheer.
Sidoo kale waa la mid ah in marka Madaxweynaha,Ra’iisulwasaaraha iyo ragga kale ee xildhibaanada ah oo la fikirka ahi ay isku dhajiyaan in ciidamada safka hore la keeno dalka Soomaaliya,shacbigiina leeyahay Ciidamada safka hore ma rabno gaar ahaan kuwa Ethiopia iyadoo cadaawad dheer ay kala dhaxeyso Soomaaliya,ayaa hadaba ka dhaga fureysigaan madaxda sare ay ka dhaga fureysteen Codsigii Shacbiga Soomaaliyeed ayaa iyana keeneysa in laba garab dawladii u kala jabto.
Waxaa hadaba maanka fiyoobi garan karaa in Madaxweynaha,Ra’iisal wasaaraha iyo xildhibaanada ku fikirka ahiba aysan rabin in ay dawladii ay mudada badan u fadhiyeen dalka Kenya ay si sahal ah isaga dumiyaan,haddii ay caqligooda iyo kan Shacbiga Soomaaliyeed ay adeegsanayaan,hase ahaatee xaqiiqdu waxay tahay tixdeydii aan ku iri:
Dulucdiyo ujeedada Yuusuf iyo Geediba Doorbinbaa la saaroo Dabarbaa ku xiranoo Meles-baana daadihin.
Hadaba waxaan ku soo gabagabeynayaa taladeydaan oo ah in Shacbiga Soomaaliyeed uu fadhiidka ka baxo,waxay Soomaalidu ku maahmaahdaa (Xaglo laaban Xoolo kuma yimaadaan) marka Qarankii burburay soo celintiisa uma baahna (Wait and See) waxaa loo baahan yahay in rag iyo haweenba qof waliba uu wixii uu ka geysan karo uu ka geysto lagana gudbo qof jecleysi iyo qabiil aan aduun iyo aakhiro midna wax kuu galeyn.
Ganacsaduhu waa in uu shilinkiisa ku bixiyaa soo nooleynta Qarankii naga burburay,Aqoonyahanku waa in uu huraa qalinkiisa iyo maskaxdiisa,Culumadu waa in ay u huraan ducada iyo Alla bariga.